Ukuphupha ngeTramp Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Igama elithi vagabond linentsingiselo engeyiyo kwindlela esisebenzisa ngayo ngoku. Xa sithetha ngenye sithetha umphangi ongenandawo yokuhlala ngokusisigxina kwaye engenabomi obucwangcisiweyo. Kodwa asidibani nje nabantu abangenamakhaya ebomini bokwenyani. Banokubonakala njengophawu kumaphupha ethu. Ngamanye amaxesha sibona indoda engenakhaya apha, okanye sikhetha le ndlela yobomi.
Kuzo zombini ezi meko, uphawu lwephupha lunokucacisa. Ityhila okuninzi ngobomi bakho nakwikamva. Itolikwa njani ngokuchanekileyo?
1 Uphawu lwephupha «ukunyathela» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukunyathela» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «i-vagabond» -ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukunyathela» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba ukunyathela kubonakala ephupheni, oku kuhlala kubonisa enye uphuhliso olungathandekiyo ebomini bokwenyani. Oku kuyinyani ngokukodwa kwinqanaba leshishini. Imicimbi yalo mntu kuthethwa ngaye ayihambi njengoko bekulindelwe okanye kulindelwe. Kuya kufuneka ulungele ilahleko kunye nemiceli mngeni emikhulu ehamba nazo.
Nabani na odibana nomntu ongenakhaya ephupheni, athethe naye okanye enze into naye, uhlala kubomi bemihla ngemihla ukungena uluntu olubi hamba. Umphuphi akakhethi ngonxibelelwano ngononophelo olukhulu. Ngokuchasene nale mvelaphi, woyikisa ngokuthatha umendo ongathandekiyo ebomini kwaye ulahlekelwe ligama elihle. Nokuba ukusebenzisana naba bantu kumnandi kwaye kuyonwabisa kulo mntu kuthethwa ngaye, kuya kufuneka ucinge ngononophelo malunga nokuba ungalufumana na ulonwabo lwakho lwexesha elide.
Kukwasebenza okufanayo nakwamaphupha apho umntu ekuthethwa ngaye ebhadula: kule meko, nangona kunjalo, uphawu kufuneka lube lolwakhe imikhwa emibi bonisa nangakumbi. Ngokoluvo ngokubanzi, ukuphupha kugxila kakhulu kubomi bokwenyani kwimisebenzi yakho ebaluleke ngokwenene. Nangona kunjalo, ungafunda ukuseta izinto eziphambili ngokubaluleka.
Uphawu lwephupha «ukunyathela» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo lwamaphupha, uphawu "vagabond" alunangxaki. Ngokwendlela le, inkululeko kunye ubomi bukhululekilejolisa kwinto eqhuba ngaphandle kwamakhaya.
Ukuba lo mntu kuthethwa ngaye uyindwendwe ephupheni, uyayilangazelela le nkululeko kubomi bakhe bemihla ngemihla kwaye angathanda i-corset yezithethe, imigaqo kunye nolindelo. ukubaleka. Ebomini uziva enyanzelekile ukuba aziphathe kakuhle. Endaweni yoko, ungathanda ukwenza izigqibo zakho ngokuzimeleyo, ngaphandle kokuhlala ucinga ngezinto ezilindelwe ngoontanga bakho.
Ukuba ukubonwa kubonakala ephupheni, oku kukwaluphawu lwangaphakathi, ngokoluvo lwee-psychoanalysts. ngqu zulwanoukuba iqela elinomdla lenze kubomi bakhe bokwenyani. Kwimeko apho, nangona kunjalo, sele uqaphele ukuba ingxaki inokubangela neengxabano ezinzulu noontanga bakho.
Uphawu lwephupha «i-vagabond» -ukutolika kokomoya
Ngokwendlela yokomoya, uphawu "vagabond" lubonisa Indawo kwabo bachaphazeleka kwizithethe neemfundiso ezisisiseko.